Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo markii ugu horeysay tagay Soomaaliya si uu uga qaybgalo shir madeexda IGAD - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo markii ugu horeysay tagay Soomaaliya si uu uga qaybgalo shir madeexda IGAD
Madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweynaya dhiggiisa Kenya. Sawirka: Facebook.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa maanta oo Talaado ah ka dagay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si uu ugu qaybgalo shir madaxeedka urur goboleedka IGAD, kaasoo la qorsheeyay inuu maanta ka furmo Muqdisho.
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa Madaxweyne Uhuru kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Uhuru Kenyata ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay oo Kenyaati ah oo Soomaaliya taga muddo ku dhow 35-sanno.
September 13, 2016 Soomaaliya oo xayiraadii ka qaaday Qaadka Miirowga ee Kenya